एक UI २. 2.5 को साथ अब तपाईं सुरुवातकर्ताहरूमा नेभिगेसन गेस्चरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Androidsis
una सामसु'sको वन UI २. lim मा सीमितता हराउँदै त्यो हो जुन तपाईं एन्ड्रोइड १० को नेभिगेसन गेस्चरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न थर्ड-पार्टी लन्चरहरू जस्तै महान नोभा लन्चरमा। यस नयाँ अपडेटमा पहिले नै नि: शुल्क पास छ।
धेरैले गर्न सक्ने सत्य वन यूआई घर प्रयोग गरिरहनुहोस् किनकि यो सफ्टवेयरबाट सीमित छ टान्गास सुविधाहरूले दिने नेभिगेशन इशाराहरूको प्रयोग र जुन हाम्रो मोबाईलको साथ हिड्ने बेला धेरै सहज छ।
छन् नोट २०, नोट २० अल्ट्रा र जेड फ्लिप G जी पहिलो सामसु ter टर्मिनलहरू ती व्यक्ति जसले यो फाइदा लिन्छन् वा त्यो सीमालाई हटाउँछन् जुन अझै मोबाइलमा अवस्थित छन् S10, S20 वा नोट १० आफैमा; जसको तपाईं यसको साथ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ सामसु Calc क्यालकुलेटरको GOD मोड चाल.
जब एन्ड्रोइड १० नयाँ नेभिगेसन इशाराहरूको साथ जारी गरिएको थियो, तिनीहरूलाई तेस्रो-पार्टी सुरुवातकर्ताहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति थिएन; अर्को शब्दमा, ती सबै प्रयोगकर्ताहरू जो अझै नोभा लन्चर जस्ता प्रक्षेपणकर्तासँग खुशी छन् बाँकी थियो। र यो त्यो पनि हो गुगलको पिक्सेलले समर्थन प्रस्ताव नभएसम्म केहि महिना लिए। सत्य यो हो कि तिनीहरूले यहाँ धेरै नराम्ररी खेलेका छन्।
अब मात्र हामी अघिल्लो ग्यालक्सी S20, S10, नोट 10 को लागी पर्खन सक्छौं, र दक्षिण कोरियाली ब्रान्डको अन्य उच्च अन्त जुन एक यूआई २. update अपडेट प्राप्त गर्दछ र यसले तेस्रो-पार्टी सुरुवातकर्ताहरूमा नेभिगेशन गेस्चरहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ; यो निश्चित हो कि नोभा लन्चर र अन्यहरू मे पानी जस्तो तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्।
पहिले नै पुष्टि गर्न सकिन्छ ठीक छ, यी तीन फोन कोरियाली ब्रान्ड को इशाराहरु प्रयोग गर्न सक्छ भन्न, यदि तिनीहरू भर्खरको उपलब्ध संस्करण One UI 2.5 मा अपडेट गरिएको छ; खैर, केहि आइपुगेको भर्खरको समाचार याद नगर्नुहोस् One UI संस्करण २.१ मा महिना.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » सामसु One वन UI २. now अब तपाईंलाई तेस्रो-पार्टी सुरुवातकर्ताहरूमा एन्ड्रोइड १० नेभिगेसन गेस्चरहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ